04/10/2018 - Page 2 sur 4 -
Iray volan’ny famotsoran-keloka : Mitohy ny asa
04/10/2018 admintriatra 0
Afaka folo andro eo sisa dia hikatona ny fikarakarana ny taratasim-basy, sy ny fanaterana ireo basy tsy ara-dalàna eny anivon’ny sampandraharaha natao hisahana izany. Maro araka izany ny vina napetraka hanatrarana io tanjona io, ka …Tohiny
Echographie : Maro no manao hosoka
Miparitaka erak’Antananarivo ny toerana fanaovana “échographie” amin’izao fotoana izao. Saika isaka ny elakelan-trano dia ahitana soratra lehibe hoe “échographie”. Ny olana amin’izy ity, tsy misy fepetra hentitra ny minisiteran’ny Fahasalamana amin’ny fahazoana alalana manangana azy, …Tohiny
Toamasina : Midangana ny « versement »-n’ny tuc-tuc
Anisan’ny fomba fitaterana iray tena mahavantana ny mpanjifa ao Toamasina ny « tuc-tuc », fantatry ny maro amin’ny anarana « bajaj ». Efa mifanaretsaka miaraka amin’ireo « cyclo-pousse » ny « tuc-tuc » amin’izao fotoana …Tohiny
Fanarenana ny tanàn-dehibe : Mila hampianarina fahadiovana ny olom-pirenena
Sempotry ny loto ny renivohitra, amin’ireo fako miparitaka manerana ireo boriborintany enina. Ankoatra ny loto, manampy trotraka ny fitohanana maharitra eo amin’ny fifamoivoizana isan’andro. Ireo rehetra ireo, izay mampiseho ny tsy fahaizana mitantana ataon’ny kaomina …Tohiny
Serasera momba ny pesta : Nomena vaovao marim-pototra ireo masoivoho vahiny
Manoloana ny fihanaky ny valanaretina pesta eto Madagasikara, izay efa noraisin’ny fitondram-panjakana ny fifehezana izany ankehitriny, maro ireo vaovao mampisafotofoto izay miely any ivelany tato ho ato. Noho izay indrindra, nampiantso ireo masoivoho vahiny miasa ...Tohiny
Fanaraha-maso ny asan’ny Governemanta:NIHARIHARY NY ASA VITA
Fitsarana Anosy : Nohitsian’ny Filoham-pirenena ny SMM
Niala ny minisitry ny Vola : Hisokatra ny asa fampandrosoana
Fehin-kevitry ny Frankôfônia:Hamafisina ny ady amin’ny fampihorohoroana